सुपरफुड हो गाइको घ्यू, दैनिक दुई चम्चा खाँदा यस्ता ८ फाइदा
काठमाडौं । स्वास्थ्यप्रति जागरुक धेरैजसो मानिसहरुले चिल्लोरहित आहार र व्यायाम तौल कम गर्न सबैभन्दा राम्रो विकल्प भएको मान्यता राख्छन् ।
यद्यपी, तपाईंको स्वास्थ्यका लागि सबै चिल्लो खराब हुँदैन र केही चिल्लोले वास्तवमा नै तपाईंको स्वास्थ्यमा अनेकौं फाइदा पुर्याउने गर्छ ।
गाईको घ्यूलाई एक किसिमले नेपाली सुपरफुड नै मान्न सकिन्छ किनभने यसका विभिन्न फाइदा छन् । धेरै कमलाई थाहा भएको घ्युको फाइदाबारे जानकारी लिऔं ।
विशेषज्ञका अनुसार नौनीको एक स्पष्ट रुप घ्यू हो । आयुर्वेद अनुसार यो सानो आन्द्राको अवशेषण क्षमतालाई सुधार गर्ने गर्छ र हाम्रो ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याकको अम्लीय पीएचलाई कम गर्दछ । घ्यू ओमेगा–थ्री फ्याटी एसिडको एक समृद्ध स्रोत हो जो एलडीएल कोलेस्ट्रोललाई कम गर्छ ।
उमेर बढ्नबाट रोक्छः
गाईको घ्यूमा एक प्राकृतिक एन्टीअक्सीडेन्ट हुन्छ । त्यसकारण यसले हाम्रो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टममा अपरिवर्तनीय परिवर्तनलाई रोक्छ, समय अगावै बुढो हुनबाट जोगाउँछ र अल्जाइमर रोगबाट मुक्त गराउँछ ।
कपाल र छालाका लागिः
घ्यूले हाम्रो शरिरबाट विषाक्त पदार्थलाई हटाउने काम गर्छ । आन्द्राको स्वास्थ्य राम्रो बनाउँछ र तपाईंको छाला र कपाललाई स्वस्थ राख्छ । जोर्नीलाई चिल्लो राख्न सहयोग गरेर हाम्रो हड्डीलाई बलियो बनाउँछ ।
तौल घटाउन सहयोग गर्छः
विशेषज्ञका अनुसार घ्यूले वास्तवमा नै तपाईंको तौल कम गर्न सहयोग गर्छ । घ्यूमा ब्यूटरिक एसिड र मध्यम श्रृङ्खला ट्राइग्लिसराइड्स शरिरको बोसोलाई जम्मा गरेर त्यसबाट छुटकारा पाउन मद्दत गर्छ । विशेषज्ञका अनुसार घ्यूले राम्रो एचडीएल कोलेस्ट्रोललाई बढाउन मद्दत गर्छ ।
शरिरलाई सुगठित राख्छः
यदि तपाईं आफ्नो तौल बढाउन चाहनुहुन्न भने दैनिक दुई–तीन चम्चा (१०–१५ मिलिमिटर) गाईको घ्यूको सेवन गर्नुहोस् ।
कसरी शरिरलाई फाइदा पुर्याउँछ गाईको घ्यूः
दुई थोपा गाईको घ्यू नाकमा हाल्दा तपाईंको शरिरको रोग प्रतिरोधक क्षमता बृद्धि हुन्छ । यसले वातावरणमा भएको धुलो, धुँवजा र प्रदुषणबाट हुने एलर्जीलाई कम गर्छ । यो घाँटी र नाकको संक्रमणबाट पनि जोगाउने गर्छ ।
खानामा दुई तीन चम्चा घ्यू मिसाएर खाँदा पाचन प्रक्रियामा सुधार हुन्छ ।
घ्यूले कब्जियतबाट पनि राहत दिलाउँछ ।
के तपाईलाई निन्द्रा समयमा र राम्रोसंग पर्दैन ? त्यसो भए यसो गर्नुस
काठमाडौं । आजभोलि धेरै मानिसहरु निन्द्रा नलाग्ने समस्याबाट ग्रस्त बनेका छन् । निद्रा नपर्नुका फरक...
शरिरलाई सधैं स्वस्थ र बलियो राख्न यी खानेकुरा खानुस
काठमाडौं । हाम्रो शरिरलाई शक्ति चाहिन्छ। व्यस्त जीवनशैलीका कारण हाम्रो शरिरमा भएको शक्ति ह्रास भ...
लिपस्टिकको प्रयोग यसरी गर्नुस, नत्र दिमागमा असर गर्न सक्छ
महिलाले दैनिक प्रयोग गर्ने सौन्दर्य सामग्रीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने कुन होला ? प्राय सबैको ...
स्वस्थ र दीर्घ जीवन चाहनुहुन्छ ? त्यसो भए यस्तो गर्नुस
काठमाडौं । स्वास्थ्य विज्ञहरुले विश्वभरमा ‘ब्लू जोन’ को विश्लेषण गरेका छन् । जसमा स्वस्थ जीवनशैली...
के तपाई ग्यास्ट्रिकले सताएर हैरान हुनुहुन्छ ? खाली पेटमा लसुन खानुस !
काठमाडौँ, वैशाख । मानिसले लसुनको खेती गर्न थालेको पाँच हजार वर्ष भइसक्यो । मानव स्वास्थ्यका लागि ...
अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०१९ को तीन महिनामा विश्वभर दादुराका बिरामी बढे
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०१९ को तीन महिनामा विश्व...